चलचित्र "नौकर र रबिन": अभिनेता र भूमिकाको
तस्विर Dzhoela Shumahera "नौकर र रबिन" अभिनेता पहिलो परिमाण संकलित थिए: .. Dzhordzh Kluni, एलिसिया Silverstone, अर्नोल्ड श्वार्जनेगर, आदि चौथो फिलिम को षड्यन्त्र भएको tetralogy को अघिल्लो टेप भन्दा कुनै कम भ्रामक थियो। त्यसैले संग कठिनाइ नौकर यो समय सामना के?
फिल्म "नौकर र रबिन": भूमिकाको अभिनय गर्ने कलाकार। ब्रूस वेन को भूमिका मा Dzhordzh Kluni
को ट्रिलजी को स्क्रीन सम्म Kristofera Nolana एक गाढा cloak tetralogy मा सुपर हिरो बर्टन / कर्नेलससुमाकर अविश्वसनीय लोकप्रियता गरिन्थ्यो। एक स्थायी डाली र महंगा विशेष प्रभाव: तथापि, Nolan आफ्नो मिलाइएको दुई indisputable लाभ मा नौकर हास्य को प्रशंसक पक्षमा लोभ्याए। Dzhoela Shumahera सिर्जना, पाठ्यक्रम, यो घमण्ड गर्न सक्दैन।
उदाहरणका लागि, फिलिम मा "नौकर र रबिन" डार्क नाइट को भूमिका प्रदर्शन अभिनेता, फेरि प्रतिस्थापित। ठाउँमा वैल Kilmer समय Dzhordzha Kluni मा बढ्दो तारा लिए।
एक सुपर हिरो रबिन - प्लट लागि को रूप मा, tetralogy को नयाँ भाग मा नौकर एक साथी प्राप्त। कहिलेकाहीं रबिन गाढा नाइट, नौकर मद्दत गर्छ र कहिलेकाहीं आफ्नो साझेदार सुरक्षित गर्न बाध्य किनभने यो, असल र खराब दुवै छ।
श्री स्थिर र केटी नाम पइजन मुछिएको चौथो फिलिम मा antagonists को।
"नौकर र रबिन": अभिनेता र भूमिकाको। रबिन रूपमा क्रिस O'Donnell
नौकर खेल्छ जो Dzhordzh Kluni, यदि - व्यक्ति ज्ञात छ, त्यसपछि क्रिस O'Donnell, रबिन को रूप मा प्रकट, विशेष महिमा कमाएको छैन।
फिल्म "नौकर र रबिन" अभिनेता Clooney र O'Donnell साथीहरू खेल्दै। नौकर जवान सुरक्षा र उहाँलाई सिकाउनुभयो। तर antigeroinya पइजन विशिष्ट pheromones आकर्षण गर्ने रबिन मार्फत। त्यसपछि त्यो रबिन आफ्नो सल्लाहकार विरुद्ध कार्य बनाउँछ। अन्त मा, पइजन को हिज्जे अन्तर्गत आफूलाई नौकर गर्दछ।
क्रिस O'Donnell जासूसी रोमाञ्चक 1993 दुर्भाग्यवश मा d'Artagnan पनि प्ले "तिनजनासशस्त्रसिपाही" को अमेरिकी संस्करणमा भाग लिन, यो भूमिका लागि अभिनेता, एक "Razzie" को लागि नामांकित भएको थियो।
"नौकर र रबिन" को प्रीमियर पछि Dzhordzh Kluni राम्रो चलचित्र मा तोड व्यवस्थित छ, तर O'Donnell र यस्तो "ग्रे गरेको एनाटोमी," "अभ्यास" र "NCIS रूपमा टेलिभिजन श्रृंखला को स्तर मा रह्यो।" तर, त्यो कहिले काँही सुविधा फिलिमहरु "Kinsey," "बहिनीहरु," "Maks Peyn," आदि मा देखा ...
Batgirl रूपमा alicia Silverstone
नाम एलिसिया Silverstone को 90 को दशक मा एकदम कम से कम अमेरिका चिरपरिचित थियो। '93 फिर्ता, त्यो फिल्म "द नाश" मा मुख्य खलनायक को छविमा देखियो। त्यसपछि कलाकार Aerosmith केही क्लिप को एक हेरोइन बन्ने, आफ्नो व्यक्ति चासो शह सुरु हुन्छ। बाहिर स्क्रीन मा 95th मा कमेडी एलिसिया Silverstone संग "Clueless", र आलोचकहरु यसलाई भावी तारा स्क्रीन छ कि सबै आवाज उडायो।
तथापि, तारा गरेको क्यारियर चाँडै टाढा Blown। र यो प्रक्रिया फिल्म "नौकर र रबिन" संग थाले। यो चलचित्र मा अभिनेता एक एकदम दरो वेशभूषा मा खिच्नुभयो थिए। Silverstone एक सानो वजन प्राप्त र vestment Batgirl धेरै आकर्षक खोज्दैन। अमेरिकामा, केही अतिरिक्त किलो गंभीर आलोचना लागि अवसर हो। त्यसपछि केही निर्देशक ठीक किनभने बेमेल मोडेल मापदण्डहरु को भूमिका मा केटी अस्वीकार गरियो। हालै, एलिसिया जस्तै कमेडी "पिशाच" र नाटक रूपमा वर्ग "बी" चलचित्र मा स्क्रीन मा निस्क्यो "खेल देवताहरूको।"
प्रदर्शन गर्ने अन्य भूमिकाको
सेलिब्रेटीहरू सूची चलचित्र "नौकर र रबिन", छैन अन्त शोभा बढाएका गर्ने।
अर्नोल्ड श्वार्जनेगर परियोजना भूमिका श्री स्थिर को antagonist को थियो। यस्तो परिक्रमा सबै दर्शक Arnie व्यक्तित्वको रूपमा हैरानी, को परिदृश्य महत वैज्ञानिकहरू छ।
पइजन र Bane - फिल्म को अभिनेता "को नौकर र रबिन" उमा Thurman र Dzhip Svenson खलनायक को एक जोडी प्ले। पहिलो उत्परिवर्ती toxins गर्न जोखिम कारण बन्दछ। बैन पनि खलनायक गरेको मा गरिएका जो अविश्वसनीय बलियो प्रतिद्वन्द्वीको छ "भाग्य-टिन।"
एक व्यक्ति उमा Thurman बक्समा कार्यालय मा अभिनेत्री जडानमा प्रतिनिधित्व आवश्यकता छैन Quentin Tarantino, को Dzhip Svenson कम प्रसिद्ध देखि हिट भने। तर उहाँले व्यावसायिक wrestlers को सर्कलमा ज्ञात छ।
पनि फ्रेम मा Maykl Gof ( "ड्रेकुला"), पैट Hingle ( "अधिकतम प्रवेग") र एल Makferson ( "Dzheyn Eyr") थिए।
चलचित्र "को कथा №17" मा एक मजबूत व्यक्तित्व को इतिहास। अभिनेताहरु, वर्णहरू "दिग्गज" चित्र 2013
व्हाइट हाउस को मुक्तिदाता को भूमिका मा अभिनेता Dzherard Batler: कार्य 2013 "Olympus झरेको छ"
फिल्म "को कराते बच्चाहरु": अभिनेता र भूमिकाको, कथा
वल्ट डिज्नी। कार्टून वर्ण
अफ्रिकी काला साबुन: समीक्षा र विवरण
आक्रमण - यो के हो? कृमि infestation: बच्चाहरु र वयस्क मा लक्षण
Kabbalah: उनको कलाई मा रातो मुद्दा। रातो मुद्दा को अर्थ। प्रार्थना
सद्भाव र समृद्धि को महालक्ष्मी देवी
तल्ला ताप लागि एकाइ मिश्रण। क्षेत्रीय सम्मेलनमा मूल्य
जिप्सम ब्लक: प्रकार, सुविधाहरू, विनिर्देशों
दूत चरा चेतावनी रूपमा चरा बारे लोक omens?
हामी एक आकर्षक सहायक "गुलाब" हुक कसरी गर्न वर्णन
चिकित्सा प्रतीक - प्राचीन मानिसहरूका निको को तरिका को एक प्रतिबिम्ब